Kpido: Forbes | Martech Zone
Enweghị ọtụtụ ụbọchị na anaghị m agụ mmelite sitere na LinkedIn, na-ejikọ onye na LinkedIn, na-esonye n'otu otu na LinkedIn, ma ọ bụ na-akwalite ọdịnaya na azụmahịa anyị na LinkedIn. LinkedIn bụ ndụ dị mkpa maka azụmaahịa m - enwere m obi ụtọ na nwelite ahụ m mere na akaụntụ adịchaghị mbụ n'afọ a. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ dị egwu site na iduzi mgbasa ozi mmekọrịta na ndị ọrụ LinkedIn sitere na weebụ. Jide n'aka na ịkekọrịta
Teradata, na mmekorita ya na Forbes Insights, weputara nyocha ohuru nke choputara inyocha ihe ima aka na azịza nke imebi onu ahia. Nnyocha ahụ gụnyere ndị CMO ise na-eduga ma ụlọ ọrụ B2B na B2C ịkekọrịta nzụlite, echiche, nsogbu na azịza ha dị iche iche. Akwụkwọ akụkọ ahụ na-atụle ihe ịma aka nke ahịa ahịa, gụnyere nke ọ bụla nwere ọhụụ nke aka ya, ahụmịhe ndị ahịa na-enweghị atụ, ozi ezighi ezi, na-akpali ndị ahịa mkpụmkpụ oge dị ogologo oge maka atụmatụ ogologo oge, adịghị mma.
News.com - Bearish na Blogs Forbes.com - MySpace Afụ Di na nwunye nke ndetu na-adọrọ mmasị na ntiwapụ nke blọọgụ. Dị ka ọ bụla 'afụ', folks na-ekwu okwu banyere 'nwa'. Ihe m na-eme bụ na Nick Denton anaghị enweta 'bearish na blọọgụ', ọ na-agbada na blọọgụ ọjọọ dị ka isi mmalite ego. Blọọgụ ga-aga n’ihu na-etolite oge ọ bụla ma tinye aka na websaịtị niile. Agbanyeghị, dịka ọ dị na weebụsaịtị ọ bụla, ọdịnaya
Izu a bụ izu siri ike. Ọrụ m dị egwu ma enwere m obi ụtọ maka ndị ọgbọ m na ndị ahịa m. Na nke mbụ, agbanyeghị, ekwenyere m na blọọgụ m metụtara na mmekọrịta mmekọrịta m. Ebe m na ha kwurịtara okwu ogologo oge, ekwetaghị m na enwere m nsogbu na onye were m n’ọrụ. Ndị ndu m kwenyesiri ike na ịde blọgụ dị ka okwu dị mma. N'ezie, ha enweghị ike ibu ọrụ maka okwu m ebe ọ bụ na ha bụ nke m na ee e